HIM | Health in Myanmar » 2015 » April
Miscarriage သူ့အလိုလို ကိုယ်ဝန်ပျက်ခြင်း
Author: HimBur | Category: ၁၈နှစ်ပြည့်မှဖတ်ပါ။, Myanmarno comments | Tags: ကျန်းမာရေး အသိ, အမျိုးသမီး, ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
ကိုယ်ဝန် တခါပျက်ဘူးသူ ၂၅% ထပ်ပျက်နိုင်တယ်။ ထပ်ထပ်ပျက်နေသူ ၁% ရှိတယ်။ တချို့နေရာတွေမှာ သိသာပြီး၊ မဖျက်ဘဲပျက်တဲ့ ကိုယ်ဝန်ပျက်မှုပေါင်းဟာ ကိုယ်ဝန်စုစုပေါင်းရဲ့ ၁၅% ရှိတယ်။ အမေရိကားမှာ ၁ဝ-၂၅% ရှိတယ်။ တချို့မှာ ဘာလို့လဲပြောမရဘူး။ ကံတရားအားကိုးပါ။ အပြုသဘောဆောင်ပါ။ ကိုယ်ဝန်ပျက်တာ အများဆုံးက ပဌမ ၃ လပိုင်းမှာဖြစ်တယ်။ အနေအထိုင် အစားအသောက် ဆင်ခြင်ပါ။ ကိုယ်ဝန်အပ်ပါ။
Human rights violation against women living with HIV in Myanmar
A human rights violation was revealed by Lord McConnell during his visit to the International HIV/AIDS Alliance last month. He tweeted: HIV+ women giving birth in some areas sterilised against their will. Horrific insight from Myanmar Positive Women. I’ve heardalot of human rights violations against people living with HIV in Myanmar but had […]
In most places in the world, medicine isaself-governing profession. We vote for our leaders. No so in Myanmar. Jamie ++++++++++++++++++ Independence guarantees for new medical council in doubt Shwe Yee Saw Myint The Myanmar Times 24 April 2015 The government has repealed the former Myanmar Medical Council Law following approval of new legislation […]
Well the advantage of the World Bank paying EIGHTY MILLION US DOLLARS to pay children to attend school is that this grant/loan should haveafast burn rate. The health grant/loan will likely not spend as fast. Jamie ++++++++++++++++++ Millions to Benefit from Myanmar’s New Partnership Framework With the World Bank Group Friday, 24 April […]
မြိတ်တွင် AIDS ဖြင့် သေဆုံးသူများအတွက် ဆုတောင်းပွဲ ပြုလုပ်မည်
Author: HimBur | Category: Myanmar, Newsno comments | Tags: AIDS, HIV, အကူအညီ
အနှိုင်းမဲ့အဖွဲ့သည် ပြီးခဲ့သည့်နှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့က ကမ္ဘာ့အေအိုင်ဒီအက်စ်နေ့ အထိမ်းအမှတ်ပွဲကို မြိတ်မြို့နယ် အတွင်းရှိ AIDS ဝေဒနာရှင်များအား ဖိတ်ကြားပြီး ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲများကိုလည်း ပြုလုပ်ပေးခဲ့သည်ဟု ယင်းအဖွဲ့မှ သိရသည်။
Author: HimBur | Category: Myanmar, Newsno comments | Tags: ART, HIV, အခွင့်အရေး, ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံမှာ HIV ပိုး ရှိနေသူပေါင်း ၁ သိန်း၊ ၉ သောင်းနီးပါးရှိနေတယ်။ ART ဆေးလိုအပ်နေသူက ၁ သိန်း၊ ၂ သောင်းကျော် ရှိနေတယ်လို့ ကျန်းမာရေး ဝန်ကြီးဌာန ထုတ်ပြန်ချက်က ဆိုတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ HIV/AIDS ကျဆင်း၊ ပျောက်ကင်းနိုင်ပါစေ။
ART delivery model comparison
You can downloadapaper on ART delivery models which comparesafew different countries. Myanmar is in the list. The authors think that countries might learn from one another. Fat chance. http://www.biomedcentral.com/1472-6963/15/176/abstract Jamie
Virginity loss အပျိုရည်ပျက်ခြင်း အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်များ
Author: HimBur | Category: ၁၈နှစ်ပြည့်မှဖတ်ပါ။, Myanmar1 comment | Tags: ပညာပေး, အမျိုးသမီး, ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
အမျိုးသမီး အများစုဟာ ယောက်ျားနဲ့ ပဌမဆုံး လိင်ဆက်ဆံရင် အပျိုမှေးပေါက်သွားလို့ သွေးထွက်မယ်၊ ၁-၃ ရက်အထိ နည်းနည်းထွက်မယ်။ မ-အင်္ဂါ ဖူးရောင်နေမယ်၊ ၁-၃ ရက်ကြာ နာနေမယ်။ ၃ ရက်ထက် ပိုကြာနေရင်၊ သွေးဆင်းတာလဲ များမယ်ဆိုရင် ဆရာဝန်ပြပါ။
Author: HimBur | Category: Myanmar, ဆောင်းပါးno comments | Tags: HIV, နည်းလမ်း, ပညာပေး, ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
HIV ပိုးဟာ (အယ်လ်ကာလီ) နဲ့ အက်စစ်ဓါတ်ခေါ် pH level မတူရင်လည်း ခံနိုင်မတူပါ။ pH7ထက် နည်းတာရော pH 8 ထက်များတာမှာပါ ကောင်းကောင်း မရှင်နိုင်ပါ။ ကျန်းမာနေတဲ့ အမျိုးသမီးရဲ့ ဗဂျိုင်းနာထဲမှာ အက်စစ်ဓါတ်အခြေအနေရှိလို့ HIV ပိုးဟာ ကြာကြာမရှင်နိုင်တာဖြစ်တယ်။
Anal practice and HIV စအိုလမ်းနည်းနဲ့ HIV
Author: HimBur | Category: ၁၈နှစ်ပြည့်မှဖတ်ပါ။, Myanmarno comments | Tags: HIV, ကျန်းမာရေး အသိ, နည်းလမ်း, ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
တိတိကျကျပြောရရင် အကာအကွယ်မပါ (ကွန်ဒွမ်) မသုံးပဲ HIV ပိုးရှိနေသူရဲ့ စအိုလမ်းကို လိင်ဆက်ဆံမှု တကြိမ်ပြုခြင်းကနေ HIV ကူးစက်နိုင်မှုဟာ မိန်းမဗဂျိုင်းနားလမ်းကို အဲလိုဆက်ဆံနည်းနဲ့ အတူလောက် ဖြစ်တယ်။ ဒါပေမယ့် HIV မရှိသူဟာ အပြုခံရသူဖြစ်နေရင် အခွင့်အလမ်း နည်းနည်းသက်သာတယ်။